Isku darka cashada iyo is biirsaday fiidki si loo xasuusto | Ragga Stylish
Paco Maria Garcia | | nololeedka, Waqtiyada firaaqada
Habeenada xagaaga ayaa ah waqtiga ku habboon in lala qaato fiidkii ugu wanaagsan saaxiibbadeen, ehelka iyo qaraabada. Haddii aan joogno Madrid, mid ka mid ah soo jeedimaha ugu fiican ayaa ah in la isku daro casho iyo is biirsaday. Wax walba isla aasaaska.
Meelaha waaweyn ee Madrid dhexdeeda, waxaa jira meelo nooc kasta oo dookhyo ah. Waxay yihiin goobo loogu talagalay jawi rasmi ah, mid aan rasmi ahayn, mid culus ama ka xiiso badan. Dhaqameed ama leh faahfaahin cusub.
3 Baarka Sando
4 kaynta yeey
5 Arzábal Reina Sofiya
6 Naadiga Farshaxanka Madrid
Markii aan raadineyno jawi isku dhafan, oo leh taabasho caalami ah iyo cunnooyinka ugu fiican, Opium Madrid waa meesha. Billy Baroja waa kuugga mas'uulka ka ah casho sharaf layaableh habeen kasta. Si tan loo sameeyo, wuxuu adeegsadaa menu uu isagu wax ka beddelayo, tixraacyo badanna ku leh cunnada isku dhafka ah.
Casho ka dib, noocyo kala duwan oo is biirsaday iyo labo jawi diskoo si fiidkii loogu noolaado.
Waa wax caadi ah in la arko dad caan ah oo kala duwan oo Tatel ah, maxaa yeelay waa mid ka mid ah meelaha loogu jecel yahay dadka caanka ah. Dalabkeeda cunnada waa mid heer sare ah, oo lagu dhammaystiray liiska cuntada. Waxaas oo dhan oo ku yaal barxad weyn oo leh naqshad aad u soo jiidasho leh.
Isku-darka raaxada leh ee cunnada Isbaanishka oo leh taabasho xagga bari iyo qalaad iyo nuances ah. Tapas-ka La Barra de Sandó waxay leeyihiin heer xiiso leh.
Bosco de Lobos waa dhisme ku dhex yaal beer. Cunnada waxay lahaan doonaan khibrad gaar ah oo gastronomic ah, gudaha Kuliyadda Madrid ee Farshaxannada. Si loo muujiyo makhaayada Talyaani iyo menukeeda is biirsaday ee kaladuwan.
Arzábal Reina Sofiya
Dabeecaddan dabiiciga ah iyo jawiga ayaa isku qasan. Soo-booqdeyaashu waxay ku raaxeysan karaan casho iyo is biirsaday xagaaga oo dhan, meel mudnaan leh.
Naadiga Farshaxanka Madrid
Dhismahan waad ku raaxeysan kartaa dhammaantood. Ka cun makhaayadeeda, ku hayso is biirsaday baararkeeda cocktail ama diskooga. Jawi dhalinyaro iyo firfircoon.
Ilaha sawirka: Makhaayadaha.com
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Cashada xagaaga ee ugu fiican Madrid: casho iyo is biirsaday
Fall ayaa dib u soo celin doonta isbeddelka milatari